मिटरब्याजी अनुरुदको ठगी धन्धा : ८० बिघा जग्गा कहाँबाट आयो ? - The Public Today
मिटरब्याजी अनुरुदको ठगी धन्धा : ८० बिघा जग्गा कहाँबाट आयो ?
मिटरब्याजी अनुरुद साहको २०५५ सालमा ५ विघा मात्रै जग्गा थियो । तर अहिले उनको ८० बिघा जग्गा छन् । गाउँमा मात्र होइन्, शहर बजारमा समेत घडेरी छन् । उनले १२ करोंड बढी रुपैँया ऋण लगानी गरेका छन् । महोत्तरीको भंगहा–५ सिद्धपुरका मिटरब्याजी अनुरुदको २० बर्ष अघि विवाह हुँदा सम्पत्तिको नाममा ५ बिघा जग्गा मात्र थियो । त्यो पनि संगोलमा । तर, अहिले उनी करोडौंको धनसम्पत्ति जोडेका छन् । त्यो कहाँ बाट आयो ? प्रश्नको उत्तर हो– गरिबीलाई लुटेर । बैमानी–सैतानी गरेर । यस्तै जवाफ दिएर भंगहा स्थानीयबासिन्दाले उनको परिचय दिन्छन् ।
विभिन्न सहर र गाउँका घरघडेरी, खेत गरी उनले ८० बिघा जोडेको उनकी पत्नी संगीताले बताइन् । त्यति मात्र होइन, अनुरुद्धले १२ करोड भन्दा बढी रकम मिटरब्याजमा लगाएको उनको दाबी छ । ८ बर्ष अघि अनुरुदले श्रीमति संजितालाई चरम यातना दिएर घरबाट लखेटेको स्थानीयहरु बताउँछन् । अदालतमा संगिताले अनुरुदविरुद्द मुद्दा लडिरहेकी छिन् । अनुरुदको ठगी विरुद्द उनकी श्रीमति पनि उभिएकी छिन् ।
आफु फस्ने डरले मिटर ब्याजी अनुरुदले फर्जी तसमुक बनाएर गरिबलाई रुवाएर उनको हड्पेको जग्गा र रुपैंया उनले आमा, दाइ, भाउजू, फूपू सासूको लक्ष्मीनियाँ देवीको नाममा लुकाउँदै स्थानीयले जनाए । अनुरुद्धले हालै भंगहा नगरपालिकामा आमा पार्वतीको नाममा क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरेका छन् ।
पीडित संगीताका अनुसार, अनुरुदले अफ्नै जग्गा दाइ लक्ष्मण, आमा पार्वती, फूपू सासू लक्ष्मीनियाँ, भाउजू वन्दना लगायतका नाममा राखेका छन् । उनको नाममा भने १४ बिघाभन्दा केही बढी मात्र राखेको संगीताले बताइन् । दाइ, आमा, भाउजूलगायतका नाममा प्रतिव्यक्ति १० बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको संगीताको दाबी छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण भए फस्ने डरले अनुरुद्धले सबै काम आफ्नै नाममा गर्दैनन् । ऋण लगानीका साथै जग्गा र जमिन खरिदरबिक्री आफ्ना दाइ, आमा, भाउजू, फूपू सासुलगायतका नाममा गर्ने गरेका छन्,’ संगीताले भनिन्। अनुरुद्ध साहबारे अनुसन्धान भए उनी जेल जाने निश्चित रहेको स्थानीयको दाबी छ ।
ऋण लगानी गर्दा ५ गुणादेखि २४ गुणासम्म बढीको तमसुक गराउने, अगाडिको मिति लेखाउने, ऋणबिनै पनि तमसुक बनाउने, अदालतमा मुद्दा दायर गरेर गरिबका घरघडेरी लिलाम गरिदिने, लिएको पैसाको भर्पाई नदिने, ऋणी महिलालाई यौन सम्बन्ध राख्न दबाब दिने, अन्य मिटरब्याजीबाट सस्तोमा कपाली तमसुक किनेर मुद्दा लड्नेजस्ता धन्दा अनुरुद्धले गरिरहेको तथ्य स्थानीयले खुलासा गरेका छन् ।
उनीबाट उनको गाउँसहित वरपरवका धेरै व्यक्ति शोषण र अन्यायमा परेका छन् । गरिबलाई फर्जी तमसुक बनाएर लुटेका कुख्यात् मिटरब्याजी अनुरुदले आफ्नै पत्नी संगीतामाथि ८ बर्ष अघि जाइलगे ।
पतिको हिंसा सहन नसकेपछि संगीता देवी १० वर्षीया छोरी चम्पासहित ८ वर्षदेखि महोत्तरीको बलबा नगरपालिका बलबा सरपल्लोमा शरणस्थित माइती घरमा शरण लिएर बसिरहेकी हुन् ।
संगीता न्यायका लागि वर्षौदेखि भौतारिरहेकी छन् । अनुरुद्धको मिटरब्याजी, ठगी, बेइमानी र परस्त्री गमनजस्ता गतिविधिबाट आजित उनले अंशसहित सम्बन्ध विच्छेद माग गर्दै महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन् । श्रीमान् अनुरुदविरुद्ध २०७५ भदौ ३१ मा मुद्दा दर्ता गराएको संगीताले जानकारी दिइन् ।
उनीहरुका १६ वर्षीय छोरा आशिक साह र १० वर्षीया छोरी चम्पा छन् । तर छोरी जन्मेदेखि पतिले यातना दिन थालेकाले संगीता माइतको शरण लिन बाध्य भएकी हुन् । छोरालाई भने अनुरुद्धले पढाउने बहानामा छलछाम गरी आफूबाट खोसेर लगेको तर नपढाएको संगीताको गुनासो छ ।
‘अनुरुद्धबाट अंश लिई सम्बन्ध विच्छेद नै गर्नुपर्ने धेरै कारण छन् । उनी मान्छे होइनन्, मानवको रुपमा राक्षस हुन् । विवाहको केही वर्षपश्चात् चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गरी कैयौं गुणा बढीको तमसुक बनाउने, पर स्त्रीहरुसँग सामुन्नेमै अनैतिक सम्बन्ध राख्ने, बेइमानी ठगीजस्ता धन्दा गर्न थाले,’ संगीताले गुनासो गरिन् ।
पति अनुरुदलाई त्यस्तो धन्दा नगर्न आग्रह गर्दा आफूलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने, घरबाट बाहिर निकालिदिने, दाम्लोमा बाँधेर राख्नेजस्ता यातना दिने गरेको संगीताको आरोप छ ।
श्रीमानले मात्र होइन, जेठाजु लक्ष्मण साह, सासु पार्वती देवीसमेतले मलाई पटकपटक कुटपिट गरी यातना दिएका छन् । ‘एकपटक जेठाजुले मेरो खुट्टा नै भाँचिदिएका थिए,’ संगीताले विगतका दुःख सम्झिँदै भनिन्, ‘त्यो घरमा सबै राक्षस प्रवृतिका छन् । अनुरुदलाई जसरी पनि पैसा चाहिएको छ । मलाई त इज्जत चाहिन्छ। त्यसैले म सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगेको हुँ ।’
श्रीमती विस्थापित भएयता अनुरुदले घरमा संगीताकै फूपू लक्ष्मीनियाँलाई राखेका छन् । अनुरुदले बेइमानी तथा ठगी गरेर जोडेका १२ बिघाभन्दा बढी जग्गा लक्ष्मीनियाँकै नाउँमा पास गरिदिएको संगीताको भनाइ छ । अनुरुद्धका छिमेकीले समेत उनले फूपू सासू घरमा ल्याएर राखेको पुष्टि गरे। साथै उनले अन्य महिलालाई समेत घरमा ल्याएर अनैतिक सम्बन्ध राख्ने गरेको छिमेकीको आरोप छ ।
बाहिरबाट महिला ल्याउँछन् । केही ऋणी महिलालाई धनसम्पति लिलाम गरिदिने लोभ देखाएर यौन सम्बन्ध राख्छन्,’ एक छिमेकीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘अनुरुदलाई जे जसरी भए पनि केवल पैसा चाहियो । इज्जत, प्रतिष्ठाको कुनै ख्याल छैन ।’
भंगहा–५ सिद्धपुरका ६० बर्षीय गोदी मुसहरका छोरा दिनेश र रामचन्द्रले पंजाब कमाउन जान अनुरुदसंग २१ हजार कर्जा लिए । २ बर्षमा गोदी बिरुद्ध आदालतमा मुद्धा हालेर ६ लाख तिरायो । जो जीवनभरी गरिबीको जाँतो पिसिदैं आएका थिए, उनलाई मिटर ब्याजी अनरुदले छोडेनन् ।
‘पुरा गाउँलेलाई ऋण दिएर ठगेर रुवाएको छ,’ भंगहा –५ सिद्धपुरका ६० बर्षीय पीडित गोदी मुसहर भन्छन्,‘ जो सुन्दर महिला छ , जसको घरमा राम्रो छोरी बुहारी छ । त्यो घरको पुरुषलाई विदेश जान ऋण दिन्छ घरका पुरुषहरु बाहिर गयो भने महिलाहरुलाई १–२ साल फकाएर राख्छ, उनको गल्त काम बिरुद्ध बोल्न खोज्यो भने अदालतमा गएर मुद्दा हालिदिन्छ ।’ त्यसको डरले कोही उनको बिरुद्द बोल्न डराएको उनले भने ।
कस्तो गलत काम ? भन्ने प्रश्नमा गोदीले थपें,‘अनुरुदले धनसंगै धर्म लिन पनि पछि पर्दैन । सबै कुरा आफै बुझ्नुस्, सबै खोलेर के भनु ।’ ६–७ बर्ष अघि आफ्नो श्रीमतिलाई मिटर ब्याजी अनुरुदले घरबाट भगाइसेको उनले बताए ।‘प्रहरी–प्रशासन अदालत सबैलाई उनले पैसा खर्च गरेर किनेको छ,’उनले भने ।
मिटरब्याजी अनरुद्धसंग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । आफुमाथि ऋण लिएर तिर्न नसक्दा गलत आरोप लगाई रहेको संचार माध्यममा उनले स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । अनरुदको दाई लक्ष्मणलाई भेट्दा उनी केही बोल्न चाहेनन् ।
ठगीको आरोप लगेको मिटर ब्याजी अनुरुदउपर जिल्ला प्रहरी कार्यायल जलेश्वर महोत्तरीमा उजुरी दर्ताको तयारी भइरहेको छ ।